Izigqoko ezingcono kakhulu zezinja ebusika nasehlobo | Izinja World
Izigqoko zenja ezinhle kakhulu zasebusika nasehlobo
Nathi Cerezo | 08/11/2021 12:35 | Izesekeli zezinja
Izigqoko zezinja ziyithuluzi eliwusizo kakhulu kokubili ezinyangeni ezishisa kakhulu zonyaka nasebusika obunzima kakhulu, futhi hhayi nje ukuvikela amakhanda ezilwane ezifuywayo, kodwa futhi ngoba zithandeka nje ngeyodwa!
Kulesi sihloko ngeke sikhulume kuphela ngezigqoko zezinja mayelana nomsebenzi wazo kanye namathiphu awusizo kakhulu okuthi ungawakhetha kanjani, sizobona nemikhiqizo embalwa emihle. Siphinde sincoma ukuthi ufunde lesi esinye isihloko mayelana izingubo zezinja ezincane: amajazi afudumele nama-jumpers Ukuze inja yakho ihambisane!
6 Piezas Set de Bandanas...
Kuoser - Juego de gorro y...
Isigqoko senja ...
Isigqoko se-Carolilly Knitted ...
Izingcezu ezi-2 zesethi yamabhontshisi ...
I-Pssopp Cap Dog ...
1 Isigqoko esingcono kakhulu sezinja
1.1 Isivalo se-Visor senja yakho nesakho
1.2 Isigqoko sosuku lokuzalwa sezinja ezisesitayeleni
1.3 I-cap yasehlobo ene-visor
1.4 Ijazi lemvula elinezigqoko elingangeni manzi
1.5 Isigqoko sasebusika se-Crochet
1.6 Ukufudumala kwendlebe nentamo
1.7 Isigqoko se-Cowboy sezinja eziqine kakhulu
2 Izigqoko zezinja zenzani?
3 Indlela yokukhetha isigqoko esingcono kakhulu senja yakho
4 Amathiphu okujwayela inja yakho
5 Ungathenga kuphi izigqoko zenja
Isigqoko esingcono kakhulu sezinja
Isivalo se-Visor senja yakho nesakho
I-Pawaboo 2 Isethi ye ...
Lesi sigqoko esiphezulu sinakho konke, ngisho nomfanekiso omkhulu wokufanisa nenja yakho! Ngaphezu kokutholakala ngombala omnyama noluhlaza okwesibhakabhaka, ikepisi linosayizi abaningana ukuze livumelane kahle kakhulu nekhanda lenja yakho, ukuze unqume ukuthi iyiphi ezomfanela kangcono kuzodingeka ulinganise ibanga ukusuka endlebeni ukuya endlebeni. indlebe ngeteyiphu yokulinganisa. Ikepisi linezimbobo ezimbili zokubeka izindlebe futhi likhululekile futhi kulula ukuligqoka futhi lilungiswa ngebhande le-velcro ngemuva kanye nentambo evalwe ngepulasitiki esilevini.
Ngakolunye uhlangothi, abanye abasebenzisi bakhomba lokho ukulinganisa kuqinile ezinjeni ezinkulu.
Isigqoko sosuku lokuzalwa sezinja ezisesitayeleni
Isigqoko sosuku lokuzalwa sika...
Uma uthanda inja yakho ngaphezu kwanoma yini kulo mhlaba, awukwazi ukuyeka ukugubha usuku lwayo lokuzalwa ngazo zonke izitayela ezimfanele, yingakho lesi sigqoko esihle esimise okwekhekhe sifanelekile. Kufakwe ne-bandana eqedela ukuhlanganisa. Indwangu ithambile kakhulu futhi iboshwe ngentambo ngokuvala ipulasitiki elingana ngaphansi kwesilevu. Itholakala ngemibala emibili, oluhlaza okwesibhakabhaka nopinki. Njengephuzu elibi, kubonakala sengathi usayizi ulungile futhi kunzima ukugqoka, nakuba umphumela ungeke ube muhle.
I-cap yasehlobo ene-visor
Una ukhululekile cap ehlobo ngendwangu epholile kakhulu futhi itholakala ngemibala emithathu (i-denim blue, pink and black), amasayizi ahlukahlukene (kusuka ku-S kuya ku-L) kanye nepulasitiki yakudala nokuvalwa kwentambo. Iphinde ibe nezimbobo ezimbili ezindlebeni ukuze ilingane kangcono. Lo modeli ugqama ikakhulukazi ngendwangu yayo, njengoba sishilo ukuthi iyintsha kakhulu, futhi ilula kakhulu, iphefumula futhi idonsa umswakama, okwenza ilungele ihlobo.
Ijazi lemvula elinezigqoko elingangeni manzi
I-Zellar Waterproof ye ...
Ngokuvamile, izigqoko ezingenamanzi zivame ukungezwa ku-raincoat, ngoba, ukuze sivikele inja yethu emvuleni, kungcono uma simboza wonke umzimba. Ngale modeli ungayigqoka kalula (iqukethe ukuvalwa kwe-velcro), ngaphezu kwalokho, inezimbobo ezimbalwa zehhanisi, ibhande ... ngakho isilwane sizokhululeka kakhulu futhi sivikeleke ngokuphelele emvuleni. Imininingwane efana nokuthi ingaphakathi lenziwe nge-mesh ephefumulayo, imichilo ekhanyayo kanye nephakethe elincane elinethezekile lokugcina imiklomelo noma yini enye yenza le modeli ibe ngenye yamajazi emvula angcono kakhulu ezilwane ezifuywayo.
Isigqoko sasebusika se-Crochet
I-DELIFUR Ikepisi Elihlekisayo ...
Qaphela, ngoba uma ubona inja yakho igqoke lesi sigqoko esihle esikhiloshiwe, nentshakaza nakho konke, kungenzeka ube nokuhlasela kothando. Itholakala ngamasayizi amaningana nemibala (kokubili nge-aftertaste kaKhisimusi, noma ngokuphefumulelwa nguSanta Claus noma ama-elves akhe), imodeli efudumele kakhulu. enembobo yobuso nenye intamo. Ngaphezu kwalokho, ifinyelela phansi impela, nayo esebenza njengesikhafu. Okuwukuphela kodwa ukuthi ayinazo izimbobo ezindlebeni.
Ukufudumala kwendlebe nentamo
Ihuqu Lenja ...
Umkhiqizo onelukuluku ohlobene nezigqoko zezinja izifudumezi zendlebe nentamo njengalesi. Asebenza njengephenti lakudala eliyiswa abantu ezintabeni: kuye ngokuthi siligqoka kanjani, singakwazi ukuvala intamo noma izindlebe. Nalokhu kwakamuva, ngaphezu kwalokho, inja izozizwa incane, ngakho ingasetshenziswa ezimweni ezicindezela izilwane, njengeziphepho, imikhosi ... ngokungangabazeki umkhiqizo othakazelisayo kakhulu esingakwazi futhi ukuvikela umholi ebusika.
Isigqoko se-Cowboy sezinja eziqine kakhulu
Isigqoko se-cowboy ...
Besingafuni ukuqeda ngaphandle kokukuncoma esinye sezigqoko zenja ezingasebenziseki kakhulu (asivikeli emakhazeni noma ekushiseni) kodwa sihle ngokungenangqondo Esikutholayo: lesi sigqoko se-cowboy, esinomphetho obanzi nentambo yaso, esenziwe ngezandla futhi enendwangu enhle kakhulu. Kuzobukeka sengathi isilwane sakho esifuywayo sesihambile e-Dallas!
Izigqoko zezinja zenzani?
Isigqoko sezinja akugcini nje ngokusiza ukugcina isilwane sakho sisemfashinini yakamuva noma sibe yinhle kakhulu epaki, futhi zinemisebenzi eminingi, ikakhulukazi leyo ehlobene nokuvikelwa ezimeni zesimo sezulu.
Okokuqala, izigqoko zimelela isivikelo esikhulu emakhazeni, ikakhulukazi uma zenziwe ngoboya. Khumbula ukuthi uma uhlala endaweni epholile noma epholile akudingekile ukubeka isigqoko kuso, noma kunjalo, emazingeni okushisa aphansi kakhulu, noma ngokuba khona kweqhwa, isigqoko sizosiza ukugcina inja yakho ifudumele. Njengoba ogogo besho, ukuze ugweme imikhuhlane kufanele ufudumale izinyawo nekhanda!
Okwesibili, izigqoko ziwusizo kakhulu ezimweni zokushisa, nakuba kulokhu kungaba ngcono ukuwabiza ngokuthi ama-caps, ngoba ukuze akwazi ukufeza umsebenzi wawo ngendlela efanele kufanele abe ne-visor. Ngakho-ke, hhayi ikhanda lenja kuphela elivikelekile elangeni nasekushiseni, kodwa namehlo, njengoba, njengabantu, i-cap igwema imisebe ye-UVA.
Okokugcina, amakepisi nezigqoko ezingangeni manzi kuwumqondo omuhle uma ukhipha inja yakho ngosuku lwemvula, kusukela ngenxa yophiko (ikakhulukazi uma bengumdobi) amanzi ngeke angene emehlweni akho, okuzokwenza uzizwe ukhululekile.
Indlela yokukhetha isigqoko esingcono kakhulu senja yakho
Ukukhetha isigqoko kungaba nzima (uxolo, i-pun ayinakuphikiswa), yingakho lawa macebiso angaba usizo:
Khetha kahle usayizi. Kulungile, kuyisisekelo, kodwa kulula ukuthi ngenjabulo yokuthenga i-tiara entsha ye-Cujo ukhohlwe ukulinganisa ikhanda lakhe ukuze lilingane kahle futhi lingawi noma limkhame. Buka ngemodeli ngayinye, njengoba izilinganiso zingahluka.
Cabanga ukuthi uzoyisebenzisela ini. Ngeke udinge uhlobo lwesigqoko esifanayo uma lina, ukuthi uma kubanda sengathi libalele kakhulu. Njengoba sishilo ngenhla, kubanda akukho okufana nesigqoko soboya noma ezinye izinto ezifudumele; ngenxa yelanga, i-cap ene-visor nendwangu yokuphefumula, kanye nemvula, isigqoko somdobi noma nge-visor eyenziwe ngendwangu engenamanzi.
Bheja ngokunethezeka kwenja yakho. Ngenxa yalokhu, akunconywa kuphela ukuthi ubhekisise usayizi, kodwa futhi nakwezinye izakhi, isibonelo, uma indwangu yenziwe ngezinto ezilumayo noma ukuvala, okungaba umugqa werabha ovala ngaphansi kwesilevu, i-velcro, noma intambo evalwe ngepulasitiki. Izigqoko ezinezimbobo ezindlebeni nazo zinconywa kakhulu, njengoba zizinzile futhi zikhululekile.
Amathiphu okujwayela inja yakho
Ezinye izinja zivuma zonke izinhlobo zezesekeli futhi kubonakala sengathi ziyizibonelo zemvelo, noma kunjalo, ezinye Kunzima ukwamukela into abayibona yangaphandle. Ukuze uzijwayeze:
Qiniseka ukuthi usayizi ulungile ukuze isigqoko sikhululeke ngangokunokwenzeka. Uma uzinzile (ngaphandle kokuqinisa, kunjalo), bazoyisekela kangcono.
Vumela okokuqala, ngaphambi kokuyibeka, iphunga futhi uyihlole ukuze uyijwayele.
Beka kokunye imizuzu embalwa usuku ngalunye ukuze ujwayele.
Uma ekugcineni ingekho indlela, ungaphoqeleli. Uma ukhathazekile ngelanga, ungakhetha ezinye izesekeli (njengezibuko zezinja) noma ngisho nokuvikela ilanga ezilwaneni ezifuywayo. Ungazama futhi ukugwema amahora emvula eshisa kakhulu, ebandayo noma enzima.
Ungathenga kuphi izigqoko zenja
Kukhona amathani ezindawo ezahlukene lapho ungathenga khona izigqoko zezinja, umphelelisi wokuthi, ngenxa yokuklama kwawo okulula, unamamodeli amaningi ahlukene, okuyinto enhle kakhulu. Ngokwesibonelo:
En AmazonNjengoba ubonile ekukhethweni kwemikhiqizo esiyincomile ngenhla, banamamodeli okumisa izimoto ezintathu, zombili ezisikiwe ezilula neziyinkimbinkimbi futhi eziyinkimbinkimbi. Ngaphezu kwalokho, uma unenkontileka yenketho ye-Prime, unayo ekhaya lutho.
En izitolo ezikhethekile njenge-TiendaAnimal noma i-Kiwoko nazo zinezigqoko ezimbalwa zezinja. Into ethokozisayo ngalezi zinketho ukuthi, ngokuba nezitolo ezibonakalayo, ungazivakashela ukuze ubone ukuthi usayizi nemodeli kufanelana nalokho wena nesilwane sakho esifuywayo esikufunayo.
Okokugcina, ungakhiphi ezinye izinketho ezinhle kakhulu, ngokwesibonelo, kunamakhasi amaningi ewebhu namaphrofayili ezingosini ezifana Etsy lapho bethengisa khona izigqoko ezenziwe ngezandla. Ngaphandle kokungabaza, zingenye yezinketho ezingcono kakhulu uma ufuna isigqoko sesilwane sakho esifuywayo sibe ngesokuqala futhi sihluke.
Sithemba ukuthi sikusizile ukuthi uthole, phakathi kwale nqwaba yezigqoko zezinja, leso esikufanelekela kangcono wena nesilwane sakho esifuywayo. Sitshele, wake wagqoka isigqoko? Ingabe unayo imodeli oyintandokazi? Ingabe kwathatha isikhathi eside ukujwayela?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izigqoko zenja ezinhle kakhulu zasebusika nasehlobo